Iindaba -Izinto eziMiselweyo zokuQhafaza, i-Q355, indlela yokukhetha izinto ezisemgangathweni.
Izinto banikwe umgangatho, kutheni sikhetha Q355.
Abathengi abaninzi bandibuza malunga nezinto ze umgangatho, nabahlobo abaninzi abathenga ii Ukutsala iringlock Andazi ukuba kutheni sisebenzisa i-Q355 (Q345) kukhetho lwezinto ezisemgangathweni, ikwakhona imigangatho emininzi enesitampu sensimbi se-Q355 esibhalwe emarikeni, kodwa sixutywe nezinto zeQ235. Kule meko ingentla, thinaUkukhawulezisa ukunikezela (Ubunjineli) Co., Ltd.., Njengomhleli oyintloko we "Chinese scaffold technical technical technical", uya kukunika uhlalutyo ukusuka kwindawo yokwakha, ukucacisa iingxaki zomgangatho "Q235 wezinto ezibonakalayo"!
Okokuqala, makhe ndichaze ukuba i-Q355 kunye ne-Q235 zithetha ntoni.
I-Q345 (Q355) luhlobo lwesinyithi, isinyithi esiphantsi esetyenziswa ngokubanzi kwiibhulorho, izithuthi, iinqanawa, izakhiwo, iinqanawa zoxinzelelo, izixhobo ezizodwa, njl. ”Q” kuthetha amandla ezivuno, kunye nama-345 kuthetha amandla esivuno sentsimbi. ngu 345MPa.
I-Q235 yentsimbi eqhelekileyo yolwakhiwo ikwabizwa ngokuba yintsimbi ye-A3.Ikhabhoni eqhelekileyo yentsimbi-ithafa etyhidiweyo luhlobo lwezinto zentsimbi.Q imele umda wokuvunwa kolu hlobo lwezinto, kwaye i-235 ngasemva ibhekisa kwixabiso lesivuno solu hlobo imathiriyeli, emalunga ne-235MPa.
Ukuba izinto ezisemgangathweni zokutshixa iringi yi-Q235, umthamo wayo yi-87% kuphela ye-Q355. Umthamo wokuthwala komgangatho uhlala ungama-90% omthamo wokuthwala ovumelekileyo, ongu-47.4kN Ukuba imathiriyeli yomgangatho itshintshiwe yaba yi-Q235, ixabiso loyilo / umthamo wokuthwala ovumelekileyo womgangatho = 47.4 / 46.1 = 103%, ongaphezulu komthamo ovumelekileyo wokuthwala kwaye uneengozi ezinokubakho kwezokhuseleko.
Njengoko sonke sisazi, ubunjineli benkunkuma yenye yemithombo elishumi eyintloko yengozi kubunjineli bokwakha, kwaye umgangatho yeyona nto ibaluleke kakhulu kwintonga yentsimbi kwinkqubo yokutshixa iringi, ngenxa yoko kukhetho lwezinto ezibonakalayo, kufuneka siqwalasele ngokungqongqo!